आहा ! ज्वालामुखीबाट निर्मित आठौं आश्चर्य
Monday, October 14, 2019 | सोमबार, असोज २७, २०७६
पर्यटन यस्तो पनि
श्रीलंका पर्यटनका लागि राम्रो गन्तव्य मानिन्छ । श्रीलंकाको सबैभन्दा चर्चित पर्यटकीय स्थल हो, सिगरिया रक । यो पाँचाैं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र यसलाई आठौं आश्चर्यका रुपमा लिइन्छ । श्रीलंका पुग्ने सबै पर्यटक पुग्ने क्षेत्रमा पर्छ यो । ऐतिहासिक स्थल रुचाउनेहरु यहाँ पुग्छन् ।
तेस्रो शताब्दीमा यसलाई मठका रुपमा चिनिन्थ्यो
ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका कारण सिगरिया रक हेर्नका लागि संसारभरबाट पर्यटक आउँछन् । यो चट्टानी ज्वालामुखीबाट निस्किएको लाभाबाट बनेको हो । यहाँको दृश्यले मानिस र प्रकृतिबीचको एक अनौठौ सम्बन्ध दर्साउँछ ।
तेस्रो शताब्दीदेखि यो स्थान मठका रुपमा चिनिन्थ्यो । यहाँ सिँढीदार बगैंचा, पोखरी र जलाशसमेत छ । यहाँका किल्लाको परिसरलाई प्राचीन सहरी योजनाको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सिगरिया अर्थात लायन रक
राजा कश्यपले पाँचौं शताब्दीमा आवास बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर, राजाको मृत्युपछि यो स्थान पुनः बौद्ध मठका रुपमा १४औं शताब्दीसम्म चर्चामा रह्यो । यसको प्रवेशद्वारा चट्टानको उत्तरी भागमा रहेको छ । यो चट्टानको डिजाइन नै यसरी गरिएको छ कि यो विशाल ढुंगा सिंह जस्तै देखिन्छ । यसको माथिल्लो भागमा क्षति पुगेको भए पनि तल्लो क्षेत्र जस्ताको तस्तै छ ।
तीन मिरर वाल र भित्तेचित्रले ढाकिएको चट्टान
सिगरियाको पश्चिमी पर्खाल भित्तेचित्रले ढाकिएको छ । जो कश्यपको शासनकालमा बनेको थियो । यिनीहरुमध्ये १८ वटा भित्तेचित्र आज पनि देख्न सकिन्छ । यी चित्रमा नारी सौन्दर्यसँग जोडिएका विषय छन् । सिगरियाको सबैभन्दा महतत्वपूर्ण वस्तु भनेको मिरर वाल हो । प्राचीन समयमा प्राचीन कालमा यसको यस्तो हेरचाह गरिएको थियो कि यसमा राजाले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्थे । मिरर वालमाथि सिगरियामा आउनेहरुका लागि लेखिएका शिलालेख, कविता र चित्रहरु पनि छन् । सबैभन्दा प्राचीनतम शिलालेख आठौं शताब्दीको छ ।
हजार वर्ष पुरानो पर्यटकीय स्थल
शिलालेखका अनुसार यो एक हजार वर्षअघि पनि पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रुपमा थियो । यहाँका भवन र उद्यानले यहाँको अद्भुत वास्तुशिल्प स्मारकका रचनाकारले अद्वितीय र रचनात्मक प्रविधिको एक कौशल प्रयोग गरिएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ९, २०७६, ०१:३४:००
किन देखिएन कुनै पनि राडारमा सी चिनफिङको प्लेन ?
प्लेनबाट आउने आफन्त लिन एयरपोर्ट जाँदै हुनुहुन्छ ? यो सूचना हेरेर जानुस्
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले बढ्लान त पर्यटक ?
चीन विभाजन गर्ने प्रयास 'किचिएका शरीर र भाँचिएका हड्डीहरूमा' टुंगिनेछ
टर्कीको आक्रमणले सिरियामा एक लाखले छोडे घर
इजलासभित्रै न्यायाधीशले गोली चलाए
पेरिसमा आफ्नै कर्मचारीले गरे चार प्रहरीको हत्या
जनशक्ति नहुँदा शव परीक्षण गृह प्रयोगविहीन
लागूऔषधसहित दाङबाट पाँच पक्राउ
सुँगुरको पित्त र कलेजो खाँदा तीन कैदीको मृत्यु
गोरुले हान्दा ७५ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु
चिनियाँ ऋणले डुबेका ८ देश !
यस्ता परिकार थिए भारतका प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई दिएको रात्री भोजमा
राष्ट्रपतिको हातबाट टीका थाप्न शितल निवास पुगे उच्च पदस्थ
यसरी गरियो चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागत
डेस्क विमल नेपाल (फिचर संयाेजक) के बी भण्डारी नवराज कुँवर चक्र धमला